Gịnị Iji Lee Na Provence France | Save A Train
Home > Travel Europe > Gịnị Iji Lee Na Provence France
Ọ bụrụ na ọ bụ a iji nwayọọ ijeụkwụ ndụ ị na-achọ, mgbe ahụ ị na-na na na-nri ebe. Foto; Fields nke lavender, sunflowers, na osisi oliv lunch Nri ehihie Sọnde n'okpuru ndò nke osisi ụgbọelu na mbara obodo, a Cafe creme na a n'akụkụ ụzọ Cafe tinyere a kpagharịa site a ọhịa nke akpu na chestnut osisi dị ka a digestive. Nke a bụ Provence – ihe ịhụ na-esi e.
Nke a bụ a n'ógbè buru ibu ọdịiche na njikọ. Provence odịbe ya mgbagwoju n'okpuru a ákwà nke dị mfe ụtọ. Ọ bụ ebe obibi ndị red agba nke Esterel ugwu, uto nke tapenade, senti nke rosemary, cadence nke olu okwu olu okwu, na mistral, ifufe na ahuwo Nnam si na Alps. Ya mere, na-eme ihe ndị dị ka nke ukwu, oke! Ka anyị nyere gị aka!
Provence - ihe ịhụ: Art
Site March 1st, 2019 na January 5th, 2020, na Carrieres de Lumieres, bụbu okwute tụgharịa immersive nkà ihe ngosi nka na Les Baux-de-Provence, akwado ihe ngosi raara nye Vincent Van Gogh nkà.
Van Gogh mmekọrịta mmadụ na Provence bụ ezigbo onye. The na-ese nọrọ ikpeazụ di na nwunye nke afọ nke ndụ ya na a French region, Nrịrọ na ebube ìhè na mma. O si Paris na Arles na 1888, dị ka o kweere na “dum ga-eme n'ọdịnihu nke ọhụrụ art nwere ike dị na Midi” na e kwetara na mgbapu na Saint-Remy-de-Provence mgbe ahụ ike ya jụrụ. Ma ebe ndị a sitere n'ike mmụọ nsọ ya ụfọdụ kasị ama osise na ekpokọtara ya pụrụ iche style. N'ihi na ngosi ewu ewu, anyị nwere ike ikwu na ị akwụkwọ tupu na Carrieres de Lumieres website.
Lyon ka Provence Train pricess
Provence - ihe ịhụ: Akara ngosi nke oge a na Marseilles
Nke a pụtara ihe ngosi nka explores na akụkọ ihe mere eme, omenala, na mmepeanya nke Mediterranean region site anthropological ngosi, n'usoro art ihe ngosi, na ihe nkiri. The collection na-anọdụ na a obi ike, dịkọrọ ndụ ụlọ mere site Algerie-mụrụ, Marseilles gụrụ akwụkwọ atụpụta ụkpụrụ ụlọ Rudy Ricciotti, na Roland Carta. Ọ na-jikọrọ site a vertigo-inducing footbridge na nke 13 na narị afọ Fort St. John, si nke e nwere stupendous echiche nke Vieux Port na gburugburu osimiri.
Provence - ihe ịhụ: Castellane
Nke a bụ a maa mma obodo na nsọtụ nke Verdon akpiri. Castellane, Provence bụ a ọmarịcha obere obodo na bịara n'ikperé mmiri nke Verdon osimiri a akwụsịtụ ebe ke Napoleon Road (Nsoro Napoleon) gbara ya gburugburu mara mma, ọhịa ugwu. Adịkwaghị ama oké nkume nke Notre-Dame du ROC uka ila, na Provencal ochie obodo bụ a maze nke ọmarịcha warara Lanes, e wusiri ike ụdị dị ka Tour Pentagonale (ise-kwadoro elu) na Gate Elekere (elekere ụzọ ámá), na mara mma Place Marcel Sauvaire square - obi Castellane mere.
34 ruu Nationale
34 Rue Nationale bụ ụlọ ebe Napoleon kwụsịrị nri ehihie na 3 March 1815 na nloghachi ya si n'àgwàetiti Elba. Open ka ọha na eze, ọ bụ taa Middle Verdon ngosi nka nke na-ewu ewu nkà na omenala.
Notre-Dame du ROC uka
Ije ije Fans ga na-atụ uche na-eso footpath na-eduga ruo Notre-Dame du ROC uka si n'azụ ụka na gburugburu 30 nkeji. The echiche site n'elu n'elu gburugburu obodo bụ pụtara!
Provence - ihe ịhụ: The poopu’ Obí nke Avignon
Edepụtara dị ka a World Heritage Site site UNESCO, n'obí bụ otu n'ime 10 kasị gara ncheta na France. ọ na-akawanye 650,000 ọbịa kwa afọ. A ezi ihe nnọchianya nke mmetụta nke Western Christianity na narị afọ nke 14. Nke a 15,000km masterpiece nke a ncheta bụ kasị ochie e wusiri ike na nnukwu Gothic n'obí Europe.
Benedict XII, onye wuru Old Obí n'ebe ọwụwa anyanwụ na n'ebe ugwu. Onye nọchiri ya Clement nke Isii wuru New Obí n'ebe ndịda na ọdịda anyanwụ. The ụlọ elu ụlọ na 11 akụkọ nke Departmental Archives. Ya elu nke 52 mita-eme ka ị anya ntughari. Ele anya na ya site na Ofel nke paradaịs Manutention Cinema, na ị ga-ahụ ihe anyị pụtara!
Obí Ahazie omenala ihe, isiokwu njegharị, ihe ngosi, na egwu n'afọ niile. Ọ na-ụlọ n'ime mgbidi ya na Musée de l'Oeuvre. na n'oge okpomọkụ, a nnukwu nkà ihe ngosi na-ewe ndị Great banye n'Ụlọ Ekpere mgbe Main n'Ogige-aghọ onye ghe oghe nkiri na-egosi si Avignon, Provence Ụlọ ihe nkiri Festival kere site Jean Vilar na 1947.
Lyon ka ọnụ ahịa ụgbọ oloko Avignon
Provence - ihe ịhụ: Avignon, oroma, Chateauneuf-du-Pape
N'ime omimi banye n'ime ime obodo France and discover Roman heritage among the rolling vineyards. Iju na Mmeri Njiko na Roman ọgbọ egwuregwu. Njem site na tụụrụ ubi vaịn nke Chateauneuf-du-Pape, Provence, na nlele obodo mmanya n'oge a akatabi okop nnọkọ. Enwe mmasị UNESCO World Heritage-depụtara Pont du Gard - a Roman ịwa ọwa mmiri. Gaa Leta ochie obodo nke Les Baux de Provence. N'elu ugwu dị elu na Alpines ugwu, na-achọpụta na Provencal obodo nta nke Gordes na Roussillon.
Olee otú Iji Nweta E?
site Train, n'ezie! Okporo ígwè njem na Provence na-nyere site mainline ụgbọ oloko, gụnyere elu-ọsọ TGV, ndịda si Paris, via Lyon, Avignon, Aix-en-Provence, na Marseilles, mgbe tinyere Mediterranean n'ụsọ oké osimiri (bụghị elu ọsọ) ka Nice, France. Nwere ike nweta gị tiketi n'ime nkeji si Save A Train
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fprovence-see-get-there%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / de na / ja ma ọ bụ / tr na ndị ọzọ asụsụ.